Iray volan'ny Sampana Fifohazana | FJKM Amboniloha
Iray volan’ny Sampana Fifohazana
Mandritra ity volana Jona 2013 ity ny iray volan’ny sampana Fifohazana (SAFIF) eto amin’ny FJKM Amboniloha. Toa izao manaraka izao, ireo hetsika sy fandaharana aroson’izy ireo iaraha manao aminao sy amiko.
1. Takarivam-pifaliana iarahana @ sampana Fifohazana sy fikambanana rehetra ny 25 jona
Ahitan-tsika arendrina, podium evanjelika, varotra sakafo isankarazany. Ny sampana rehtra no ho hitantsika hanray anjara ao. Ho antsika ray amandreny maro izy ity, satria betsaka ireo ankizy te hivoaka, nefa ny arabe sy ny fety any an-kafa feno olona mamo sy miady. Ka hanokafana sehatra miavaka ny aty ampiangonana sady fotoana araraotina hitoriana ny Filazantsara rahateo, indindra moa fa ny Sampana Fifohazana no loha lisitra manritra ity iray volany ity.
Ny sampana sy ny fikambanana no miara misalahy na dia tsy iray volan’ny sampana Fifohazana aza mba ho betsaka ny tolotra hisafidianan’ny mpanjifa.
2. Rindrankira ara-mpilazantsara iarahana amin’ny antoko mpihira NY AFAKA.
« Miaraha mankalaza an’i Jehovah amiko » Salamo 34:3
Io andala-tsoratra Masina io no entin’ny sampana Fifohazana hitaomana antsika tsirairay, ny alahady 30 jona hariva @ 3 ora. Rindrakira ara-mpilazantsara lehibe iaraha mitory amin’ny antoko mpihira Ny Afaka. Noezahina ho an’ny rehetra ny hetsika atao ka ny vidi-mpidirana dia toa izao :
ny lehibe 1000Ar
ny ankizy 500Ar
Miandry sy manantena ny fantrehanao ny sampna Fifohazana FJKM Amboniloha
Catégories :	Vaovao	/ par AnjGab 22 juin 2013